တံမွကျစညျးကွမျးလေး တခြောငျးက ပေးတဲ့ သငျခနျးစာ – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတမြား > တံမွကျစညျးကွမျးလေး တခြောငျးက ပေးတဲ့ သငျခနျးစာ
တစ်ခါတုန်းက တံမြက်စည်းသည်ကြီးက တံမြက်စည်းနှစ်ချောင်းကို ရောင်းချခဲ့တယ်။ ဝယ်တဲ့သူက တစ်ချောင်းကို အိမ်ပေါ်မှာလှည်းဖို့နဲ့ တစ်ချောင်းက မြေကြီးမှာ လှည်းဖို့ဆိုပြီး ဝယ်ခဲ့တာပေါ့။
မြေကြီးမှာ အလှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းက နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဖှုန်တွေနဲ့လုံးပန်း ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ထိရ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကျောက်စရစ်တွေနဲ့လဲ ကြုံရဆုံရတော့ သူ့ဘဝဟာ ကြမ်းသထက် ကြမ်းလာတယ်တဲ့။
ဒီဟာကိုကြည့်ပြီး သူ့ဘဝသူ အားငယ်တတ်လာတယ်။ အိမ်ပေါ်မှာ နေရတဲ့ တံမြက်စည်းလေးဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာ သူ့ဘဝကျတော့ နေလဲမပူ ကြမ်းတဲ့ကျောက်စရစ်တွေနဲ့မတွေ့ရ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့မဆုံနဲ့.. သူ့ဘဝသာယာနေမှာ ဘဲဆိုပြီး သူ့မိတ်ဆွေ အိမ်ပေါ်လှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းကို အားကျနေတယ်တဲ့။
နောက်ပြီး သူကအိမ်ပေါ်မှာနေရတော့ သူက သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တွေနဲ့နေရမှာပဲ ငါလိုဘဝမကြမ်းလောက်ဘူး ငါလဲသူ့လို ဘဝရောက်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး….အမြဲတွေးပြီးနေတတ်တယ်တဲ့။
ဒါနဲ့တစ်နေ့ သူ့သူငယ်ချင်းတံမြက်စည်းကို လှေခါးနားမှာ ဆုံမိကြတယ်တဲ့။ စကားပြောဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ အိမ်အောက်မြေကြီးမှာအလှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းက
“သူငယ်ချင်း မင်းဘဝက သိပ်သာယာတာပဲကွာ။ ငါ့လိုမကြမ်းတမ်းဘူး။ မကောင်းတဲ့ရနံ့တွေနဲ့ မထိတွေရဘူး။ မင်းဘဝက သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းမှာပဲလို့ပြောရှာသတဲ့! မင်းလိုဘဝမျိုးနေချင်လိုက်တာ” လို့ ခဏခဏပြောသတဲ့။ ဒါနဲ့အိမ်ပေါ်က တံမြက်စည်းကပြန်ပြောလိုက်တာက
” တကယ်တော့ အပြင်မြင်ရင်တော့ သာယာတယ်မင်းထင်ချင်ထင်လိမ့်မယ်။ မသာယာပါဘူးကွာ။ လင်မယားချင်း ရန်ဖြစ်လဲ ငါ့ကိုဆွဲပြီး ရိုက်ကြတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် ဆွဲကြ လုကြတယ်။
သားသမီးရိုက်ပြီးဆိုလဲ ငါ့ကိုအသုံးပြု တယ်။ ဒါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက် ဆွဲကြလုကြပြန်ရော ငါ့ဘဝက မင်းလိုမကြမ်းတမ်းပေမဲ့ နေ့စဉ် နားငြီးရသလို နာကျင် တဲ့ဝေဒနာ ခံစားရတယ် စိတ်ရှုပ်ရတယ်။ ငါက ပင်ပန်းတာမခံရပေမဲ့ စိတ်ရှုပ်စရာကြီးပါ။ နောက်ပြီး ငါ့ကိုဘယ်နားမှာ ထားတာလဲ မင်းသိလား ခြေနင်းခုံနားမှာထားတာ ဟိုလူလာလဲ တိုက်သွား နင်းသွား နဲ့ မင်းကွာ သေချင်စော်ကိုနံရော”
လို့ပြောပြလိုက်တော့…အိမ်အောက်တံမြက်စည်းက သူ့ဘဝသူကျေနပ်သလိုခံစား ခံစားရသွားတယ်တဲ့။
သူကတွေးလိုက်သည်မှာက ဪ.. အပြင်ပုံသဏ္ဌာန်လှပေမဲ့..ဘဝဒုက္ခထွေထွေက ငါ့ထက်များလှပါလား တကယ်တော့ ငါ့ဘဝက ကြမ်းပေမဲ့ သူ့လောက်မဆိုးသေးပါလားလို့ တွေးပြီး ခေါင်းငုံ့ကာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သူ့နေရာသူပြန်ကြသတဲ့။
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ။ လောကလူတွေလဲ ပုံပြင်လေးထဲကလို အပြင်မှာကြမ်းလို့လဲ စိတ်မပျက်နဲ့ အိမ်ကောင်းကောင်း နဲ့နေနေရတယ်။ သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တွေကြားမှာ နေနေရတယ် ဆိုပေမဲ့လဲ အားမကျနဲ့ အပြင်လှပြီး အတွင်းပုတ်တာတွေ အများကြီးပါ။
တကယ်တော့…ကိုယ်ရထားတဲ့ဘဝလေးကို အကျိုးရှိရှိပေးဆပ်ပြီး လောကကို အလှဆင်ခွင့်ရနေတာလေးကိုက ကျေနပ်စရာဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီးနေထိုင်သင့်ပါတယ်။
အပြင်မှာကြမ်းပေမဲ့ အတွင်းမှာ..သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့ရှိအောင် ကြိုးစားပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုရင်..ဘဝဟာ သာယာပါတယ်။
တဈခါတုနျးက တံမွကျစညျးသညျကွီးက တံမွကျစညျးနှဈခြောငျးကို ရောငျးခခြဲ့တယျ။ ဝယျတဲ့သူက တဈခြောငျးကို အိမျပျေါမှာလှညျးဖို့နဲ့ တဈခြောငျးက မွကွေီးမှာ လှညျးဖို့ဆိုပွီး ဝယျခဲ့တာပေါ့။
မွကွေီးမှာ အလှညျးခံရတဲ့ တံမွကျစညျးက နစေ့ဉျနတေို့ငျး ဖှုနျတှနေဲ့လုံးပနျး ကငျြကွီးကငျြငယျတှနေဲ့ထိရ ကွမျးတမျးတဲ့ ကြောကျစရဈတှနေဲ့လဲ ကွုံရဆုံရတော့ သူ့ဘဝဟာ ကွမျးသထကျ ကွမျးလာတယျတဲ့။
ဒီဟာကိုကွညျ့ပွီး သူ့ဘဝသူ အားငယျတတျလာတယျ။ အိမျပျေါမှာ နရေတဲ့ တံမွကျစညျးလေးဖွဈရငျ သိပျကောငျးမှာ သူ့ဘဝကတြော့ နလေဲမပူ ကွမျးတဲ့ကြောကျစရဈတှနေဲ့မတှရေ့ ကငျြကွီးကငျြငယျနဲ့မဆုံနဲ့.. သူ့ဘဝသာယာနမှော ဘဲဆိုပွီး သူ့မိတျဆှေ အိမျပျေါလှညျးခံရတဲ့ တံမွကျစညျးကို အားကနြတေယျတဲ့။
နောကျပွီး သူကအိမျပျေါမှာနရေတော့ သူက သငျးပြံ့တဲ့ရနံ့တှနေဲ့နရေမှာပဲ ငါလိုဘဝမကွမျးလောကျဘူး ငါလဲသူ့လို ဘဝရောကျရငျ သိပျကောငျးမှာပဲဆိုပွီး….အမွဲတှေးပွီးနတေတျတယျတဲ့။
ဒါနဲ့တဈနေ့ သူ့သူငယျခငျြးတံမွကျစညျးကို လှခေါးနားမှာ ဆုံမိကွတယျတဲ့။ စကားပွောဖွဈကွတယျပေါ့။ အိမျအောကျမွကွေီးမှာအလှညျးခံရတဲ့ တံမွကျစညျးက
“သူငယျခငျြး မငျးဘဝက သိပျသာယာတာပဲကှာ။ ငါ့လိုမကွမျးတမျးဘူး။ မကောငျးတဲ့ရနံ့တှနေဲ့ မထိတှရေဘူး။ မငျးဘဝက သိပျပြျောစရာ ကောငျးမှာပဲလို့ပွောရှာသတဲ့! မငျးလိုဘဝမြိုးနခေငျြလိုကျတာ” လို့ ခဏခဏပွောသတဲ့။ ဒါနဲ့အိမျပျေါက တံမွကျစညျးကပွနျပွောလိုကျတာက
” တကယျတော့ အပွငျမွငျရငျတော့ သာယာတယျမငျးထငျခငျြထငျလိမျ့မယျ။ မသာယာပါဘူးကှာ။ လငျမယားခငျြး ရနျဖွဈလဲ ငါ့ကိုဆှဲပွီး ရိုကျကွတယျ။ တယောကျနဲ့တယောကျ ဆှဲကွ လုကွတယျ။ သားသမီးရိုကျပွီးဆိုလဲ ငါ့ကိုအသုံးပွု တယျ။ ဒါနဲ့တယောကျနဲ့တယောကျ ဆှဲကွလုကွပွနျရော ငါ့ဘဝက မငျးလိုမကွမျးတမျးပမေဲ့ နစေ့ဉျ နားငွီးရသလို နာကငျြ တဲ့ဝဒေနာ ခံစားရတယျ စိတျရှုပျရတယျ။ ငါက ပငျပနျးတာမခံရပမေဲ့ စိတျရှုပျစရာကွီးပါ။ နောကျပွီး ငါ့ကိုဘယျနားမှာ ထားတာလဲ မငျးသိလား ခွနေငျးခုံနားမှာထားတာ ဟိုလူလာလဲ တိုကျသှား နငျးသှား နဲ့ မငျးကှာ သခေငျြစျောကိုနံရော”
လို့ပွောပွလိုကျတော့…အိမျအောကျတံမွကျစညျးက သူ့ဘဝသူကနြေပျသလိုခံစား ခံစားရသှားတယျတဲ့။
သူကတှေးလိုကျသညျမှာက ဪ.. အပွငျပုံသဏ်ဌာနျလှပမေဲ့..ဘဝဒုက်ခထှထှေကေ ငါ့ထကျမြားလှပါလား တကယျတော့ ငါ့ဘဝက ကွမျးပမေဲ့ သူ့လောကျမဆိုးသေးပါလားလို့ တှေးပွီး ခေါငျးငုံ့ကာ သူငယျခငျြးနှဈယောကျ သူ့နရောသူပွနျကွသတဲ့။
ပုံပွငျလေးကတော့ ဒါပါပဲ။ လောကလူတှလေဲ ပုံပွငျလေးထဲကလို အပွငျမှာကွမျးလို့လဲ စိတျမပကျြနဲ့ အိမျကောငျးကောငျး နဲ့နနေရေတယျ။ သငျးပြံ့တဲ့ရနံ့တှကွေားမှာ နနေရေတယျ ဆိုပမေဲ့လဲ အားမကနြဲ့ အပွငျလှပွီး အတှငျးပုတျတာတှေ အမြားကွီးပါ။
တကယျတော့…ကိုယျရထားတဲ့ဘဝလေးကို အကြိုးရှိရှိပေးဆပျပွီး လောကကို အလှဆငျခှငျ့ရနတောလေးကိုက ကနြေပျစရာဖွဈအောငျ ကွိုးစားပွီးနထေိုငျသငျ့ပါတယျ။
အပွငျမှာကွမျးပမေဲ့ အတှငျးမှာ..သငျးပြံ့တဲ့ရနံ့ရှိအောငျ ကွိုးစားပွီးနထေိုငျမယျဆိုရငျ..ဘဝဟာ သာယာပါတယျ။
Previous Article “မိဘဆိုတာ”တံမွကျစညျး မဟုတျပါဘူး ( ဒီစာလေးကိုနှလုံးသားနဲ့ ဖတျပေးကွပါ)
Next Article အင်ျဂလိပျ လို ရေးပေးတဲ့ ရညျးစားစာ ကို ၈ တနျး ဒုတိယနှဈကြောငျးသားကို ဘာသာပွနျ ခိုငျးသောအခါ….